Xog: Madaxweyne Farmaajo ‘oo laga filayo inuu soo saaro’ qoraal ku socda mucaaradka | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Xog: Madaxweyne Farmaajo ‘oo laga filayo inuu soo saaro’ qoraal ku socda...
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu wada-hadallo ugu yeero musharaxiinta mucaaradka, si xal siyaasadeed loo gaaro, Badweyn Online ayaa sidaas ogaatay.
Ilo-wareedyo ku dhow Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay inay war-gelin ka heleen Villa Somalia, taasi oo ku saabsan qoraal uu soo saari doono madaxweynaha oo uu ku dalbanayo inay kulmaan.
“Cadaadis saaran awgiis, madaxweyne Farmaajo wuxuu soo saarayaa qoraal uu ku dalbanayo in ay Madasha Musharaxiinta la kulmaan, oo ka wada hadlan sidii looga gudbi lahaa jawiga cakiran,” ayuu yiri ilo-wareed ka tirsan Madasha oo la hadlay Badweyn Online.
Xubnaha la hadlay Badweyn ayaa intaas ku daraya inay qoraalkan filayaan caawa. Badweyn oo sidoo kale la hadashay xubno ka tirsan Villa Somalia waa ay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan xilliga lasoo saari doono qoraalkaas.
“Madaxweynaha wuxuu mar walba diyaar u yahay in xaaladda dalka xal loo helo,” ayuu ku hadal gaabsaday qof codsaday inaan la magacaabin oo ka tirsan madaxtooyada.
Musharaxiinta mucaaradka ayaa dhankoodana rumeysan in cadaadis xooggan oo ka dhashay go’aanadii ay Khamiistii tagtay kasoo saareen Muqdisho iyo midka beesha caalamka ay hoggaamisay in madaxweynaha uu dalbado kulamo.
Si kastaba, ma cadda sida heshiis kasta oo la gaaro uu u dhaqan-geli karo, ayada oo la xusuusto in qodobo ay horey ugu heshiiyeen madaxweyne Farmaajo iyo Madasha Xisbiyada Qaran aanay meel-marin.
Previous articleBaarlamanka Kenya oo ka hadlay xiisadda Soomaaliya iyo sida ay doonayaan in laga yeelo
Next articleXOG: Qoorqoor oo Wakaalad ka helay MD Farmaajo iyo Doorkii Ra’iisal Wasaaraha oo meesha ka baxay
Xog cusub oo laga helay Madixii Al-shabaab ee Howlgalada Muqdisho ee dilka lagu xukumay
XOG:MD Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo Cabdi Xaashi khilaafkiisa Oga badashay afar xubnood
Maxkamad Go’aan ka gaartay Dood ka dhalatay Gabdho Diinta Islaamka Qaatay (Sawirro)
Ciidanka Somaliland oo heegan la geliyay & Shacabka oo wadnaha farta ku haya
XOG:Shabaab oo lacag sabab yaab leh kugu soo direyso iyo dad lacagtaas loo diray balse maxaa xigo
Soomaaliya oo kaalinta 1-aad ka gashay qiimaha Internet-ka ugu jaban ee Dalalka Carabta.
NISA oo war kasoo saartay Guri Hogaamiyeyaal Shabaab Ku Shirayeen oo xalay u daateyn kumandooska iyo ciidamo Mareekanka ah
Xukuumadda Somalia oo si deg deg ah uga Hadashay Geerida Cawil Daahir Salaad
Amaanka Magaalada Baydhabo oo la xoojiyey & Wufuud sare oo maanta ku sii jeedda